London: Weerar Lagu Qaaday Dad Masjid ka soo Baxay - Worldnews.com
Booliiska magaalada London ayaa sheegay in baabuur la jiirsiiyay dad ka soo baxay masaajid ku yaalla magaalada London xaley, xilli ay soo tukadeen salaadda taraawiixda.
Booliska ayaa xaqiijiyey dhimashada hal qof iyo dhaawaca 10 qof oo kale.
Gaari Van ah ayaa la sheegey
London: Dad Masaajid ka soo Baxay oo Gaari Dardarey
Booliiska magaalada London ayaa sheegaya in baabuur la jiirsiiyay dad ka soo baxay masaajid ku yaala magaalada London xaley xili ay ka soo baxayeen salaada taraawiixda....
Nin ayaa dhintay toban kalena dhaawac ayaa soo gaaray ka dib markii "weerar argagixiso" lagu qaaday dad ka soo baxay masaajid ku yaalla magaalada London oo ay taraawiix ku...
Lix qof oo ku dhimatay weerarkii London
Weerark ayaa ka dhacay buundada caanka ah ee London Bridge Booliska magaalada London ayaa sheegay in ay rumaysan yihiin in 6 qof ay ku dhinteen 48 kalena ay ku dhaawacmeen...
War degdeg ah: Gaari dad lagu jiirsiiyey magaalada London
Tiro badan oo dad ah ayaa dhaawac uu soo gaaray kadib markii gaari la jiirsiyay dad wadada marayay meel u dhaw masjidka ku yaala waqooyiga London. Dhacdadan ayaa boolisku...
​Muslimiin Baabuur lagu jiirsiiyay London
Weerar u ekaa mid si ula kac ah loo fuliyay ayaa ka dhacay magaalada London ee xarunta dalka England, kaasoo lala eegtay Muslimiin kasoo baxday Salaadii Tahajudka. Qof si...
Ugu yaraan lix qof oo ku dhimatay weerar ka dhacay London
Booliska magaalada London ayaa waxa ay sheegeen in ay rumaysan yihiin in lix qof ay ku dhinteen in ka badan 20 kalena ay ku dhaawacmeen wax ay ku tilmaameen fal argagixiso....
Booliska magaalada London ayaa waxa ay sheegeen in ay rumaysan yihiin in lix qof ay ku dhinteen in ka badan 20 kalena ay ku dhaawacmeen wax ay ku tilmaameen fal argagixiso. Saddex qof oo looga shakisan yahay in ay ahaayeen dadkii weerarka fuliyay ayaa waxaa toogasho ku dilay booliska . Rabshada ayaa billaabatay ka dib markii gaari la jiirsiiyay dad lugaynayay oo marayay...
Boqoradda Britain oo booqatay dadkii ku waxyeeloobay dabkii London
Boqoradda dalka Britain ayaa booqatay dadkii ka badbaaday dab toddobaadkii hore ka kacay dhismo ku yaala galbeedka magaalada London. Boqorad Elizabeth II oo la kulantay dadkii ay dhibaatadu soo gaadhay ayaa sheegtay in ay tahay arrin adag in laga baaqsado ka qeyb galka murugada ka taagan dalka, waxaana ay intaa ku dartay in dalka Britain ay soo wajahday mussiibooyin dhib badan...
Wiil uu dhalay madaxweynaha dalka Maraykanka ayaa weeraray duqa magaaalada London waxyar uun ka dib markii uu weerar argagixiso ka dhacay caasimadda UK kaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan afar ruux. Donald Trump Jr ayaa Twitterka soo dhigay maqaal uu sanadkii hore qoray Sadiq Khan kaas oo uu ku sheegay in taxadarka iyo feejignaantu ay noqotay qayb ka mid ah nolosha caasimadaha...
​Lix ruux oo lagu dilay masaajid ku yaala Canada
Ugu yaraan lix ruux ayaa ku dhimatay siddeed kale ayaana ku dhaawacantay rasaas lagu furay masaajid ku yaalla magaalada Quebec ee dalka Kanada. Rasaasta ayaa lagu furay Xarunta Dhaqanka Islaamka ee Quebec habeenimadii Axadda halkaas oo ay jameecaad ku tukanayeen salaad, booliiska ayaana xaqiijiyay geerida dadkaas, iyaga oo ula dhaqmaya sidii weerar argagixiso. Booliiska...
London oo La weeraray
WASHINGTON. D.C — Booliska Ingiriiska ayaa xaqiijiyey in lix qofood ay ku dhinteen 30 kalana ay ku dhaawacmeen kadib laba weerarar oo xalay ka dhacay bartamaha magaalada London. Weerarada ayaa mid ka mid ahi loo adeegsaday baabuur lagu jiirsiiyey dad marayey buundada London Bridge ee bartamaha magaalada...